အှနျလိုငျးကနတေဈဆငျ့ ဈေးရောငျးနကွေတဲ့သူတှရေဲ့ပိုဈ့တှကေို သူမအကောငျ့မှာ အခကွေးငှမေယူပဲတငျပေးသှားမညျဖွဈကွောငျးပွောပွလာတဲ့ မိုးယုစံ – Askstyle
အှနျလိုငျးကနတေဈဆငျ့ ဈေးရောငျးနကွေတဲ့သူတှရေဲ့ပိုဈ့တှကေို သူမအကောငျ့မှာ အခကွေးငှမေယူပဲတငျပေးသှားမညျဖွဈကွောငျးပွောပွလာတဲ့ မိုးယုစံ
ပရိသတျကွီးရေ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ဆိုးဝါးတဲ့အနအေထားဖွဈပျေါနတောကွောငျ့ အခွခေံလူတနျးစားတှေ စားဝတျနရေေးတျောတျောကို ခကျခဲနကွေပါတယျနျော။ ဒါတှကေို ကူညီဖွရှေငျးပေးဖို့ မငျးသမီး မိုးယုစံတဈယောကျစီစဉျနပေါတယျနျော။ မိုးယုစံဟာ အခုမှ စရောငျးမယျ့ ဈေးရောငျးသူမြားနဲ့ တဈပိုငျတဈနိုငျစီးပှားရေးလုပျမယျ့သူမြားကို သူမရဲ့ Facebook အကောငျ့ကနေ ပို့ဈတှတေငျပွီး ကူညီပေးသှားမယျ့အကွောငျး အသိပေးလာပါတယျနျော။
” အလုပျအကိုငျစခငျြသူမြားသာ….အခုခြိနျ ကနျြးမာရေး စီးပှားရေး နိုငျငံရေး မကောငျးတဲ့အခြိနျမှာ ဝမျးစာအတှကျလညျး လူတိုငျး အခကျခဲမြိုးစုံနဲ့ ရုနျးကနျနရေပီးစီးပှားရှာနရေတာပါပဲ မရှာလို့လညျး မရဘူးလနေျော ဒါကွောငျ့ စိတျကူးမိတာလေးက မိုးယုက မိုးယုအကောငျ့လေးကနေ–တဈနိုငျတဈပိုငျ စီးပှားရေး လုပျနသေူမြား–ခုမှ အကောငျ့လေးဖှငျ့ပွီး အိမျစီးပှားရေးတှကျ စလုပျကိုငျနသေူမြား–ခုမှစရငျ ကိုယျ့အကောငျ့လူသိဖို့အတှကျ ကခကျခဲအမြားကွီးရှိပါတယျ-Boost လုပျရငျလညျးပိုကျဆံမတတျနိုငျဘူးဆို ကူညီခငျြပါတယျ
မိုးယု အကောငျ့ကနေ တဈလ ကို ၃ခုလကျခံပေးပွီးကွျောငွာတငျပေးပါမယျ(ကိုဗဈကာလမို့ မိုးယုတော့ ပုံမရိုကျပေးပါဘူးနျော ပစ်စညျးလညျးပေးစရာမလိုပါဘူး တငျခငျြတဲ့ပုံနဲ့ စာသာရေးပေးပါ)အဲ့တှကျ မိုးယုဘကျက ကူညီတဲ့အနနေဲ့ အနုပညာကွေးလုံးဝ လုံးဝ မယူပါဘူးနျော မိုးယုက like share followနဲ့ရောငျးအားကောငျးအောငျက မိုးယုတာဝနျယူပေးတာမဟုတျဘူးနျော မိုးယုအကောငျ့မှာပွနျတငျကွျောငွာပေးခွငျးက ခုမှလုပျငနျးစသူမြားအတှကျ ကိုယျ့ရောငျးကုနျကို လူတှပေိုမွငျစမှောတော့သခြောပါတယျမိုးယုလကျခံတငျပေးမှာက ခုမှလုပျငနျးစတဲ့သူ /like follow နညျးသေးတဲ့အကောငျ့/တကယျအဆငျမပွလေို့ အလုပျလုပျကိုငျခငျြတဲ့ သူမြိုးရဲ့အကောငျ့ ဖွဈရပါမယျ
ကွျောငွာခငျြသူမြား messenger ကနပေဲလာပွောပေးပါ တခွားကပေးပို့တာမြားလကျခံမညျမဟုတျပါ you တို့က messager ကနေ ရောငျးမညျ့ကုနျပစ်စညျး ရဲ့ပုံရယျ ရောငျးတငျမညျ့အကောငျ့ရယျ တကယျအလုပျလုပျခငျြပွီး တကယျအဆငျမပွကွေောငျး ကိုယျ့အကောငျ့ကရောငျးပမေယျ့လူ မသိသေးကွောငျး ကိုတော့ ပုံနဲ့ စာနဲ့တကှ messenger ကနေ ပေးပို့ပေးရပါမယျ။ အဲ့ကနေ မိုးယုက ရှေးပွီးလကျခံရငျ စာပွနျပေးပါမယျ စာမပွနျရငျ လကျမခံလို့ပါနျော မိုးယုကလညျးကူညီတာဖွဈလို့ အမြားနဲ့တဈယောကျမို့လကျမခံဖွဈတာ မတငျပေးဖွဈတာရှိရငျလညျး နားလညျပေးစခေငျြပါတယျ
ဒီလမကုနျခငျ စတငျပေးပါမယျ ဘယျခြိနျထိတငျပေးမှာလညျးတော့ပွောလို့မရသေးပါဘူးနျော မိုးယုတှကျကတော့ ကိုယျတငျပီးကွျောငွာပေးလိုကျလို့ သူ့စီးပှါးရေး အဆငျပွသှေားတာ လူပိုသိသှားတာ ဖွဈရငျပဲဝမျးသာပါတယျ ရောငျးကောငျးရငျတော့အတိုငျးထကျအလှနျပေါ့ မိုးယုတှကျ ကဘာအကြိုးအမွတျမှမယူတဲ့အတှကျ ဒီလို ကူညီတာကို ကိုကျညီ အပျဆကျတဲ့သူပဲလာပါနျော ကိုယျနဲ့မဆိုငျတဲ့သူတှရေဲ့ negative အမွငျတှေ လာမမနျ့ကွပါနဲ့ မိုးယု ကူညီနိုငျတဲ့အရာကိုလိုအပျတဲ့သူတှလေညျးရှိပါတယျ အဲ့လိုလူတှတှေကျပဲ ရညျရှယျပါတယျ သူတို့အတှကျ ကွညျ့ပေးပါ အားလုံးကနျြးမာ ပြျောရှငျ စီးပှါးတိုးပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ
Pls-ဒါလေးကို ကူညီshareပေးနျောမိုးယု တဈယောကျဆီလိုတာ လိုကျပွနျနရေလို့အဆငျမပွလေို့ပါ youတို့ဘကျက ပေးရမှာလေးတှေ သခြောရေးပေးပွီးပို့ပေးပါနျော၁–ရောငျးမညျ့ကုနျပစ်စညျး၂–ရောငျးတငျမယျ့ အကောငျ့ link (ဒါမှ မိုးယုက အကောငျ့ထဲဝငျကွညျ့ပွီး ဆုံးဖွတျမှာမို့လို့ပါ)၃–တကယျလုပျခငျြပွီး အဆငျမပွကွေောငျးရေးပေးပါ(ကိုယျပို့တာ ဒီ၃ခကျြနဲ့ပွညျ့စုံလားအရငျကွညျ့ပေးပါတဈယောကျဆီ လိုတာလိုကျပွောနတော အဆငျမပွလေို့ပါအမြားနဲ့တဈယောကျမို့ပါ )Pls- အကောငျ့က like follow ၅၀၀အထကျဆို မတငျပေးပါဘူး နညျးတဲ့သူကိုဦးစားပေးပေးပါမယျ.
အမြားအသုံးဝငျပွီးရောငျးကုနျ အရအေသှေးကောငျးတဲ့ပစ်စညျးဖွဈရပါမယျ” လို့ ရေးထားပါတယျနျော။ စာဖတျပရိသတျတှထေဲမှ တကယျခကျခဲနသေူမြား မိုးယုစံရဲ့ Facebook အကောငျ့ messenger မှာ ကိုယျရောငျးခမြယျ့ ကုနျပစ်စညျးအကွောငျး သှားပွောပွထားပေးပါနျော။
ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆိုးဝါးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့် အခြေခံလူတန်းစားတွေ စားဝတ်နေရေးတော်တော်ကို ခက်ခဲနေကြပါတယ်နော်။ ဒါတွေကို ကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ မင်းသမီး မိုးယုစံတစ်ယောက်စီစဉ်နေပါတယ်နော်။ မိုးယုစံဟာ အခုမှ စရောင်းမယ့် ဈေးရောင်းသူများနဲ့ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်စီးပွားရေးလုပ်မယ့်သူများကို သူမရဲ့ Facebook အကောင့်ကနေ ပို့စ်တွေတင်ပြီး ကူညီပေးသွားမယ့်အကြောင်း အသိပေးလာပါတယ်နော်။
” အလုပ်အကိုင်စချင်သူများသာ….အခုချိန် ကျန်းမာရေး စီးပွားရေး နိုင်ငံရေး မကောင်းတဲ့အချိန်မှာ ဝမ်းစာအတွက်လည်း လူတိုင်း အခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့ ရုန်းကန်နေရပီးစီးပွားရှာနေရတာပါပဲ မရှာလို့လည်း မရဘူးလေနော် ဒါကြောင့် စိတ်ကူးမိတာလေးက မိုးယုက မိုးယုအကောင့်လေးကနေ–တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်နေသူများ–ခုမှ အကောင့်လေးဖွင့်ပြီး အိမ်စီးပွားရေးတွက် စလုပ်ကိုင်နေသူများ–ခုမှစရင် ကိုယ့်အကောင့်လူသိဖို့အတွက် ကခက်ခဲအများကြီးရှိပါတယ်-Boost လုပ်ရင်လည်းပိုက်ဆံမတတ်နိုင်ဘူးဆို ကူညီချင်ပါတယ်
မိုးယု အကောင့်ကနေ တစ်လ ကို ၃ခုလက်ခံပေးပြီးကြော်ငြာတင်ပေးပါမယ်(ကိုဗစ်ကာလမို့ မိုးယုတော့ ပုံမရိုက်ပေးပါဘူးနော် ပစ္စည်းလည်းပေးစရာမလိုပါဘူး တင်ချင်တဲ့ပုံနဲ့ စာသာရေးပေးပါ)အဲ့တွက် မိုးယုဘက်က ကူညီတဲ့အနေနဲ့ အနုပညာကြေးလုံးဝ လုံးဝ မယူပါဘူးနော် မိုးယုက like share followနဲ့ရောင်းအားကောင်းအောင်က မိုးယုတာဝန်ယူပေးတာမဟုတ်ဘူးနော် မိုးယုအကောင့်မှာပြန်တင်ကြော်ငြာပေးခြင်းက ခုမှလုပ်ငန်းစသူများအတွက် ကိုယ့်ရောင်းကုန်ကို လူတွေပိုမြင်စေမှာတော့သေချာပါတယ်မိုးယုလက်ခံတင်ပေးမှာက ခုမှလုပ်ငန်းစတဲ့သူ /like follow နည်းသေးတဲ့အကောင့်/တကယ်အဆင်မပြေလို့ အလုပ်လုပ်ကိုင်ချင်တဲ့ သူမျိုးရဲ့အကောင့် ဖြစ်ရပါမယ်
ကြော်ငြာချင်သူများ messenger ကနေပဲလာပြောပေးပါ တခြားကပေးပို့တာများလက်ခံမည်မဟုတ်ပါ you တို့က messager ကနေ ရောင်းမည့်ကုန်ပစ္စည်း ရဲ့ပုံရယ် ရောင်းတင်မည့်အကောင့်ရယ် တကယ်အလုပ်လုပ်ချင်ပြီး တကယ်အဆင်မပြေကြောင်း ကိုယ့်အကောင့်ကရောင်းပေမယ့်လူ မသိသေးကြောင်း ကိုတော့ ပုံနဲ့ စာနဲ့တကွ messenger ကနေ ပေးပို့ပေးရပါမယ်။ အဲ့ကနေ မိုးယုက ရွေးပြီးလက်ခံရင် စာပြန်ပေးပါမယ် စာမပြန်ရင် လက်မခံလို့ပါနော် မိုးယုကလည်းကူညီတာဖြစ်လို့ အများနဲ့တစ်ယောက်မို့လက်မခံဖြစ်တာ မတင်ပေးဖြစ်တာရှိရင်လည်း နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်
ဒီလမကုန်ခင် စတင်ပေးပါမယ် ဘယ်ချိန်ထိတင်ပေးမှာလည်းတော့ပြောလို့မရသေးပါဘူးနော် မိုးယုတွက်ကတော့ ကိုယ်တင်ပီးကြော်ငြာပေးလိုက်လို့ သူ့စီးပွါးရေး အဆင်ပြေသွားတာ လူပိုသိသွားတာ ဖြစ်ရင်ပဲဝမ်းသာပါတယ် ရောင်းကောင်းရင်တော့အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့ မိုးယုတွက် ကဘာအကျိုးအမြတ်မှမယူတဲ့အတွက် ဒီလို ကူညီတာကို ကိုက်ညီ အပ်ဆက်တဲ့သူပဲလာပါနော် ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့သူတွေရဲ့ negative အမြင်တွေ လာမမန့်ကြပါနဲ့ မိုးယု ကူညီနိုင်တဲ့အရာကိုလိုအပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ် အဲ့လိုလူတွေတွက်ပဲ ရည်ရွယ်ပါတယ် သူတို့အတွက် ကြည့်ပေးပါ အားလုံးကျန်းမာ ပျော်ရွှင် စီးပွါးတိုးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
Pls-ဒါလေးကို ကူညီshareပေးနော်မိုးယု တစ်ယောက်ဆီလိုတာ လိုက်ပြန်နေရလို့အဆင်မပြေလို့ပါ youတို့ဘက်က ပေးရမှာလေးတွေ သေချာရေးပေးပြီးပို့ပေးပါနော်၁–ရောင်းမည့်ကုန်ပစ္စည်း၂–ရောင်းတင်မယ့် အကောင့် link (ဒါမှ မိုးယုက အကောင့်ထဲဝင်ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်မှာမို့လို့ပါ)၃–တကယ်လုပ်ချင်ပြီး အဆင်မပြေကြောင်းရေးပေးပါ(ကိုယ်ပို့တာ ဒီ၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံလားအရင်ကြည့်ပေးပါတစ်ယောက်ဆီ လိုတာလိုက်ပြောနေတာ အဆင်မပြေလို့ပါအများနဲ့တစ်ယောက်မို့ပါ )Pls- အကောင့်က like follow ၅၀၀အထက်ဆို မတင်ပေးပါဘူး နည်းတဲ့သူကိုဦးစားပေးပေးပါမယ်.
အများအသုံးဝင်ပြီးရောင်းကုန် အရေအသွေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ရပါမယ်” လို့ ရေးထားပါတယ်နော်။ စာဖတ်ပရိသတ်တွေထဲမှ တကယ်ခက်ခဲနေသူများ မိုးယုစံရဲ့ Facebook အကောင့် messenger မှာ ကိုယ်ရောင်းချမယ့် ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း သွားပြောပြထားပေးပါနော်။